Tailwind CSS: Iyo Inobatsira-Yekutanga CSS Sisitimu uye API yekukurumidza, Inopindura Dhizaini | Martech Zone
Ndichiri mukati mehunyanzvi zuva nezuva, ini handiwane nguva yakawandisa sekuda kwangu kugovera kusangana kwakaomarara uye otomatiki iyo kambani yangu inoitira vatengi. Zvakare, ini handina yakawanda yekuwana nguva. Mazhinji tekinoroji yandinonyora nezvayo makambani anotsvaga Martech Zone kuvafukidza, asi nguva dzese kamwechete kwechinguva - kunyanya kuburikidza neTwitter - Ndinoona imwe buzz yakakomberedza tekinoroji nyowani yandinoda kugovana.
Kana iwe ukashanda muwebhu dhizaini, nharembozha app kusimudzira, kana kunyangwe kungo gadzira zvemukati manejimendi sisitimu, iwe ungangodaro wakarwa nekushungurudzika kwemakwikwi emitambo pamusoro pematafura akawanda. Kunyangwe nematurusi anoshamisa ekuvandudza akavakwa mukati mega bhurawuza, kuteedzera pasi uye kuchenesa CSS kunogona kuda nguva yakawandisa nesimba.
Mumakore achangopfuura, vagadziri vakaita rakanakisa basa rekuburitsa muunganidzwa wemastaera akagadzirwa uye akagadzirira kushandisa. Aya maCSS Stylesheets anonyatso kuzivikanwa seCSS Maitiro, kuyedza kugadzirisa ese akasiyana masitayera uye anoteerera kugona kuitira kuti vanogadzira vango tarisa fomati pane kuvaka CSS faira kubva pakutanga. Mamwe marongero akakurumbira ndeaya:
Bootstrap - chimiro chakashanduka pamusoro pemakore gumi, chakatanga kuunzwa neTwitter. Inopa zvisingaverengeki maficha. Iyo ine yakadzika pasi, inoda SASS, inorema kupfuudzwa, inoenderana neJQquery, uye yakanaka kuremerwa kurodha.
hwaro - yakajairika uye inoshandisika CSS sisitimu iyo ine matani ezvinhu izvo zviri nyore kugadzirisa. Pamusoro pezvo, pane Nheyo yeemail uye Motion UI yemifananidzo.
Tailwind CSS Chimiro
Nepo mamwe marongero achiita basa rakakura rekugarisa akakurumbira mushandisi interface zvinhu, Tailwind inoshandisa nzira inozivikanwa se Atomic CSS. Muchidimbu, Tailwind akaronga zvine hungwaru mazita ekirasi vachishandisa mutauro wechisikigo kuti vaite zvavanoti vanoita. Nekudaro, nepo Tailwind isina raibhurari yezvinhu, iko kugona kuvaka nyore ine simba, inoteerera interface nekungodoma CSS makirasi emazita akanaka, anokurumidza, uye asingaenzanisike.
Heano mimwe mienzaniso mikuru.
CSS yeRima Mode Rutsigiro
Tailwind zvakare ine inonakidza kuwedzerwa kunowanikwa yeVS Code kuitira kuti iwe ugone kuona nyore uye nekuisa makirasi kubva kuMicrosoft kodhi mhariri.
Kunyangwe zvine hungwaru, Tailwind inobvisa yega CSS isina kushandiswa paunenge uchivakira kugadzirwa, zvinoreva kuti yako bundle yekupedzisira yeCSS ndiyo diki pane yaingave iri. Muchokwadi, mazhinji maTailwind mapurojekiti anotakura asingasviki 10kB yeCSS kumutengi.
Tags: atomic cssbootstrapbulmaCSScss apicss chimirocss gridszvitaeramuswe wemhepotailwind css apiui kkit
3 Mazano Ekuvaka Yakabudirira Chat Kushambadzira Chirongwa